4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline (13790-39-1) - APICMO
ထုတ်ကုန်များ > 4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline(13790-39-1)
ကျနော်တို့ CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစည်းမျဉ်းများအောက်တွင်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် 4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline (13790-39-1) ၏အမြောက်အမြားထုတ်လုပ် synthesize နှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
အဆိုပါ epidermal growth factor receptor မျိုးရိုးဗီဇ (EGFR ဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေ) ၏ somatic ကိုသက်ဝင်ဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အတူ Non-သေးငယ်တဲ့ဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာ (NSCLC) နဲ့လူနာယေဘုယျအား EGFR tyrosine kinase inhibitors (EGFR-TKIs) အားတုံ့ပြန်ကြသည်။ -Catenin βအဆိုပါ Wnt / β-Catenin signal ကိုတစ်ဦးသော့ချက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကင်ဆာကျိတ်, အထူးသဖြင့်ကင်ဆာပင်မဆဲလ်၏ pathogenesis နှင့်တိုးတက်မှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းအရေးပါသော oncogene ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ EGFR-mutated NSCLC ဆဲလ်လိုင်းများရိုင်း-type အမျိုးအစား EGFR ဗီဇနှင့်အတူဆဲလ်လိုင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်β-Catenin ၏မြင့်မားသောစကားရပ်အဆင့်ကိုပြသကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့နှင့် XAV939 (ကβ-Catenin inhibitor) EGFR အတွက် EGFR-TKI မှထိခိုက်လွယ်တိုးမြှင့်ခဲ့သည် NSCLC ဆဲလ်လိုင်းများ -mutated ။
codon 790 (T790M) mutation အတွက်ဝယ်ယူခုခံ threonine-to-methionine mutation နှင့်အတူ EGFR-mutated NSCLC ဆဲလ်လိုင်းများတွင်, XAV939 အနေနဲ့နောက်ကြောင်းပြန်မလှည် EGFR-TKI ပေမယ့်မပြန် ပြင်. EGFR-TKI ဖို့ဆဲလ်များ၏ sensitivity ကိုမြှင့်တင်ရန်။ XAV939 နှင့် EGFR-TKIs များ၏ပေါင်းစပ်ပြင်းထန်စွာβ-Catenin signal ကို inhibited နှင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန် EGFR နှင့်β-Catenin signal ကိုအကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်အကြံပြုတစ်ဦးတည်း EGFR-TKIs ၏အသုံးပြုမှုနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ် EGFR ၏ phosphorylation လျော့နည်းသွားသည်။ အဆိုပါ T790M mutation သယ်ဆောင်သည့် EGFR-mutated ဆဲလ်လိုင်းများ၏ပင်စည်ဆဲလ်ကဲ့သို့ဂုဏ်သတ္တိများ XAV939 နှင့် BIBW2992 (အနေနဲ့နောက်ကြောင်းပြန်မလှည် EGFR-TKI) က inhibited ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်ထိုပင်စည်ဆဲလ်ကဲ့သို့ဂုဏ်သတ္တိများပြင်းထန်စွာအေးဂျင့်နှစ်ဦးစလုံး၏တစ်ဦးပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် inhibited ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးက xenograft လေ့လာမှုβ-Catenin knockdown အဆိုပါ T2992M mutation သယ်ဆောင်သည့် EGFR-mutated NSCLC ဆဲလ်အညီ BIBW790 ၏ antitumor အကျိုးသက်ရောက်မှုတိုးမြှင့်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ နိဂုံး: အဆိုပါတွေ့ရှိချက်β-Catenin အဆိုပါ T790M mutation သယ်ဆောင် EGFR-mutated NSCLC အတွက်ဝတ္ထုကုထုံးပစ်မှတ်ဖြစ်အံ့သောငှါဖော်ပြသည်။
MDL အရေအတွက် MFCD01570172
InChI Key ကို LLLHRNQLGUOJHP-UHFFFAOYSA-N ကို
မော်လီကျူးအလေးချိန် (ဆ / mol) 224.65
အပြုံး COC1 = ကို C (ကို C = C2C (= C1) ကို C (= NC = N2) □) OC
အရည်ပျော်မှတ် 184-187 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline (13790-39-1) အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကိုင်တွယ်မှု
♦ Store ကိုဖွင့်သော့ခတ်။
/ အမျိုးသားရေး / ဒေသဆိုင်ရာ / ဒေသခံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီရဲ့ contents / ကွန်တိန်နာ၏♦တစ်ခါသုံး။
RK Narla; XP ကိုလျူ; DE Myers; နှင့် FM ရေ Uckun ။ -amino-4-dimethoxyquinazoline 3- (4'-bromo-6,7'hydroxylphenyl): လူ့ glioblastoma ဆဲလ်တွေဆန့်ကျင်အစွမ်းထက် cytotoxic လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူတစ်ဝတ္ထု quinazoline ဆင်းသက်လာ။ Clin ကင်ဆာ Res ။ 1988, 41405 ။
Chappie, TA, et.al. 6,7-Dimethoxy-4-pyrrolidylquinazoline PDE10A inhibitors † .J တစ်စီးရီး၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု။ Med ။ Chem ။ 2007, 50 (2), 182-185 ။
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline (13790-39-1) အစုလိုက်မှာယူမှု & စျေးနှုန်း: